« Trinite Masina: Andriamanitra Ray, Zanaka, Fanahy Masina: Fianakaviana miaina am-pitiavana lavorary » - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Malala il y a 2 années
ALAHADY 7 JONA 2020
ALAHADY TRINITE MASINA
Eks. 34, 4b-6. 8-9; Kor. 13, 11-13; Jn. 3, 16-18
Nifarana tamin’ny Pantekoty teo ireo alahady fito fankalazana ny Paka. Manomboka amin’izao alahady fankalazana ny fetin’ny Trinite Masina izao kosa ny vanimpotoana tsotra mandavan-taona handalinana indray ny fotopototry ny fiainana kristianina araka ny fampianaran’ny evanjely. Koa rariny raha mifantoka amin’ny Trinite masina, amin’Ilay Andriamanitra Tokana Olona telo àry aloha ny fandinihana masina amin’ity alahady ity.
« Izaho no Tompo, Andriamanitra mamindra fo sy miantra, mahari-po sy be hatsaram-po amam-pahamarinana » [Vakiteny voalohany]. Fanambarana voalohany ny misterin’Andriamanitra izany. Mbola tany an’efitra ny vahoaka Israely tamin’izay, nandritra ny Dia fialana avy tany Ejipta, notarihin’i Moizy. Maro ireo zava-nitranga nandritra izany Dia fialana tany Ejipta izany, anisan’izany ilay fahotana lehibe nataon’ny vahoaka Israely: nivadika tamin’ny Tompo Andriamanitra, Ilay nanafaka azy ireo avy tany Ejipta izy ireo. Lasa nanompo andriamanin-kafa, ilay sariomby volamena niakohofan’izy ireo. Nifona ho an’ny vahoaka teo anatrehan’ny Tompo anefa i Moizy ary tamin’izany indrindra no nanambaran’ny Tompo ireo toetra soa maha Izy Azy Andriamanitra: « mpamindra fo sy miantra, mahari-po sy be hatsaram-po amam-pahamarinana ». Moa va tsy toy ny ray mangoraka ny zanany maditra izy. Ny ray aman-dreny tokoa mantsy tsy mahafoy zanaka fa ny zanaka no mahafoy ray aman-dreny. Ambony lavitra noho ny fitiavan-janaka anefa ny Fitiavan’Andriamanitra. Tsy mahafoy ny olombelona Izy. Izany no maha Ray Azy; Ray tsy mahafoy zanaka.
« Ary toy izao no nitiavan’ Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanany tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana ny fiainana mandrakizay » [Vakiteny fahatelo, ny evanjely]. Mbola fanambarana ny misterin’Andriamanitra ihany koa izany. Tamin’ny resadresaka nifanaovany tamin’i Nikodema no nanambaran’i Jesoa fa Ilay Andriamanitra efa tia ny olombelona hatrany am-boalohany dia Andriamanitra tsy mivadika amin’ny fitiavany na dia mivadibadika aza ny olombelona. Tsy fitiavan am-bava fotsiny ny Azy fa naharihariny tamin’ny asany sy tamin’ny nataony nanomboka tamin’ny nahariany an’izao tontolo izao ho an’ny olombelona ka hatramin’ny namoizany ny Zanany natao sorona hamonjena ny olombelona. Fanambarana ihany koa izany fa io Andriamanitra mitia ny olombelona io dia Andriamanitra Ray manana Zanaka Tokana. Tokana tsy misy hafa intsony afa-tsy iny Lahy Tokana nefa foiny nomena ny olombelona iny. Io Zanany Tokana io no nanaiky ho tonga olombelona dia i Jesoa Kristy.
« Ho aminareo anie ny fahasoavan’i Jesoa Kristy Tompo, sy ny fitiavan’Andriamanitra, ary ny firaisana ao amin'ny Fanahy Masina » [Vakiteny faharoa]. Teny fahenon’ny kristianina matetika izany. Teny fiarahabana ataon’ny mpisorona amin’ny fotoana fanombohana ny Eokaristia (ny Lamesa) na amin’ny fotoam-pivavahana hafa. Teny fiarahabana apostolika, nolovàna tamin’ny apostoly, ary eto dia ny apostoly Paoly no mampiasa azy. Teny fiarahabana iantsoana ny Trinite Masina; Andriamanitra Tokana Olona telo ; dia ny Ray loharanon’ny Fitiavana sy ny Zanaka (Jesoa Kristy) loharanon’ny Fahasoavana ary ny Fanahy Masina loharanon’ny Firaisana na ny Fiombonana. Mbola fanambarana ny misterin’Andriamanitra ihany koa izany. Ilay Andriamanitra Ray maneho ny Fitiavany ao amin’ny Zanany Lahy Tokana sy mampiombona ny olombelona rehetra hotiaviny ao amin’ny Fanahy Masina. Tsy Andriamanitra manirery izy fa Andriamanitry ny fianakaviana misy ny Fitiavana sy ny Fahasoavana ary ny Fiombonana. Fitiavana telozoro mampifandrohy ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.
Tsikelikely àry no nahatakaran’ny kristianina ny misterin’Andriamanitra Trinite Masina. Tsy tamin’ny fanambaràna mivantana avy amin’Andriamanitra anefa, eny tsy voasoratra ao amin’ny Baiboly ny teny hoe « Trinite Masina », fa vokatry ny fandinihana ny asan’Izy Andriamanitra hatrany am-piandohan’izao tontolo izao. Tsikelikely no nahatakaran’ny foto-pampianarana kristianina ny misterin’Andriamanitra hita ao amin’i Jesoa Kritsy Zanany tonga olombelona. Tsikelikely no nahatsapan’ny olombelona tsara sitrapo rehetra ny fitarihan’ny Fanahy Masina azy amin’ny asa soa sy tsara ataony...
« Hisaorana anie ny Trinite Masina tsy azo sarahina, ankehitriny sy mandrakizay. Amen. Voninahitra anie ho an’ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina, tahaka ny taloha sy ankehitriny ary mandrakizay. Amen. Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen »
Fanilon’i Madagasikara : Zaikabe sy Fivoriam-be hitondra fivoarana ho an’ny fikambanana - il y a 3 mois
Teny Mahavelona : « Fitiavana sy Fahamarinana no tena endrik’i Kristy » - il y a 7 mois